Fivoriambe PCB haingana - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Alohan'ny PCBfuture.com manomeza haingana fivoriambe pcb turnkeyserivisy, mpanjifa maro no milaza amintsika foana fa tsy afaka mahita mpiara-miasa pcb azo antoka ho an'ny serivisy fihodinana haingana. Ny tena olana sedrain'izy ireo dia:
a. Mpanamboatra maro no tsy te hanome serivisy fanangonana elektronika prototype satria kely ny habetsany.
b. ny orinasam-pifandraisana elektronika tsy afaka nandidy ireo singa notakiana rehetra niaraka tamin'ny masontsivana mitovy.
d. Tsy hitan'izy ireo ny orinasan'ny fivoriambe pcb mora vidy raha oharina amin'ny fanangonana ny PCB prototype azy ireo ihany
d. Ny mpanamboatra PCBA dia tsy ampy ny asany, tsy afaka nampiangona ny vokatra avo lenta.
PCBfuture.com dia mikendry ny hampitsahatra ireo ary hanome serivisy fivoriambe pcb turnkey haingana sy avo lenta.
PCBfuture dia manana traikefa manan-karena amin'ny famokarana prototype sy PCB volume ambany-afovoany ary manana ekipa fivoriambe efa za-draharaha mba hiantohana ny fivorianao PCB haingana. Ny turnkey pcb fiangonana dia mitarika fotoana fohy indrindra amin'ny indostria, haingana indrindra izahay mandefa ny PCB mivory amin'ireo mpanjifantsika ao anatin'ny 3 andro.
1. PCB Prototyping haingana indrindra ao anatin'ny 24 ora
PCBfuture dia manomboka orinasa avy amin'ny PCB Manufacturing, manana fahaiza-manao PCB matanjaka izahay hanatratra ireo fe-potoana farany sarotra amin'ny tetik'asa. Ho an'ny lafiny PCB / PCB lafiny roa ary PCB 4 sosona, afaka mamokatra haingana indrindra isika afaka 24 ora.
2. Mihodina haingana ireo singa elektronika
PCBfuture dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa matanjaka amin'ireo mpaninjara singa malaza eran-tany toa an'i Digi-Key, Arrow, Mouse, Avnet, ary Chip fijanonana sns. Ankoatr'izay, manana tahirin-kevitra manankarena ho an'ny singa ampiasaina matetika izahay. Hamarino tsara fa afaka manomana singa elektronika avo lenta miaraka amin'ny vidiny tsara sy ny fotoana fitarihana isika.
3. Serivisy fanangonana elektronika haingana
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny milina SMT be pitsiny sy mandroso ary amin'ny alàlan'ny * hole, afaka manangona karazana PCB isan-karazany miaraka amin'ny teknolojia misted isika. Tsy mitovy amin'ny mpanamboatra PCB Assembly maro, manana ekipa voatokana sy tsipika fivoriambe SMT tompon'andraikitra amin'ny fivorian'ny fivoriambe pcb haingana sy ny baiko fivorian'ny pcb prototype izahay.
Avy amin'ny teny namboarina haingana araka izay takinao, PCB manufacturing, Components sourcing, SMT Assembly, DIP Assembly, Fitsapana sy fandefasana, manitsaka ny dingana faharoa sns. Manana ekipa PMC mitandrina izahay hanaraka ny fizotrany ary hahazoana antoka fa afaka mandefa ny tabilao amin'ny mpanjifa ara-potoana isika.
Miorina amin'ny famokarana PCB tena tsara sy azo antoka lozisialy fihodinana loharano fanohanana, afaka manome toky anao izahay fa afaka mahazo serivisy fanangonana elektronika mahafa-po. Manantena ny hiara-miasa aminao izahay ho an'ireo tetik'asa fivoriambe PCB. Raha mila fanazavana fanampiny, dia mandefasa mailaka amin'ny service@pcbfuture.com.